अझै खाली भएन कलङ्की-चाबहिल सडक, महाराजगञ्जका घर हटाउन मुश्किल
प्रकाशित : 5:51 pm, सोमबार, साउन ४, २०७८
काठमाडौं । चक्रपथको दोस्रो खण्डका रुपमा रहेको कलङ्की–चाबहिल (धोबीखोलासम्म) को सडक विस्तारका लागि निर्माणस्थल अझै खाली हुन सकेको छैन । सो सडकमा पर्ने सामाखुसी–महाराजगञ्ज खण्डमा विद्युत्का पोल हटाउन बाँकी छ ।
उक्त सडकमा निर्माणको काम गर्न चिनियाँ टोली आउन चाहेको भए पनि सडक खाली भइनसकेका कारणले निर्माण शुरु गर्न ढिलाइ भएको काठमाडौँ चक्रपथ सुधार योजनाले जनाएको छ ।
सामाखुसीदेखि महाराजगञ्जसम्मका विद्युत्का खम्बा सार्ने काम भइरहेको योजनाका प्रमुख अर्जुन सुवालले बताए । विद्युत्का खम्बा एक सातामा हटाउने गरी सम्झौता भए पनि पानीले गर्दा हटाउन नसकिएको उनले जानकारी दिए । उनले भने, “पानी परिरहँदा तार हटाउन पनि गाह्रो छ र विद्युत्भार कटौती गर्ने अवस्था छैन ।”
अहिले तत्काल चिनियाँ आउनका लागि विद्युत्का खम्बाले गर्दा मात्र रोकिएको उनले जानकारी दिए। केही समय पहिले सडक विभागले निर्माणस्थल खाली भइसकेको भनेर चिनियाँ कम्पनीलाई जानकारी गराएको थियो ।
चिनियाँ आफैँले फोटो खिचेर लगेर निर्माणस्थल खाली नभएको भनी काम शुरु नगरेको उनले बताए । सडकमा रहेका साना मन्दिर कसरी अर्को ठाउँमा सार्ने भनी छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए । उनले भने, “त्यसको कहाँ बनाउने भनी पुरातत्वसँग छलफल भइरहेको छ ।”
सडक विभागले चीन सरकारको सहयोगमा कलङ्कीदेखि महाराजगञ्ज हुँदै चाबहिल सडक विस्तार गर्ने तयारी अघि बढाइरहेको छ । दुई वर्ष पहिले सडकको अधिकार क्षेत्रमा रहेका विद्युत्का खम्बा, खानेपानीको पाइप, ढल, रुख, मन्दिर, स्तूपा, व्यक्तिगत सम्पत्ति सार्ने र हटाउने काम भइरहेको छ । अहिलेसम्म त्यहाँ रहेका रुख, खानेपानी तथा ढल हटाइसकेको छ । अझै पनि यहाँका विद्युत्का पोल, स्तूपाका पर्खाललगायतका कुरा हटाउन बाँकी छ । कतिपय व्यक्तिको व्यक्तिगत सम्पत्ति हटाउन पनि बाँकी छ ।
चक्रपथको पहिलो खण्डका रुपमा चीन सरकारले कोटेश्वर–कलङ्की सडक विस्तार गरेको थियो । सो सडक सम्पन्न भएको झण्डै पाँच वर्ष भइसकेको छ । आठ लेन चौडाइमा विस्तार गरिएको सडकका कारण यस क्षेत्रमा सवारी चाप कम भएको छ । सोही सडकमा खसीबजारदेखि कलङ्कीसम्म ‘अण्डर पास’ ््निर्माण गरिएको छ ।
कलङ्कीदेखि चाबहिलसम्मको सडक पनि आठ लेनमा नै विस्तार हुनेछ । सो सडकमा पनि महाराजगञ्ज र बालाजु चोकमा ‘फ्लाई ओभर’ निर्माण गर्ने गरी डिजाइन गरिएको छ ।
« सधैं घाटामा जाने सार्वजनिक संस्थान निजीकरण किन नगर्ने ?
एकैपटक दुई कम्पनीको आइपीओ खुल्यो, कति कित्ता भर्ने ? »